Banyere Anyị - Nanchang Lebanong Garment Co., Ltd.
Nanchang Lebang Garment Co., Ltd., nke dị na Nanchang Jiangxi, China, bụ ọkachamara na -emepụta akwa akwa, ọkachamara na imewe, imepụta na ire ahịa uwe ụmụaka/ ụmụaka na ndị okenye, gụnyere uwe egwuregwu, jaket & uwe, hoodie & sweatshirt, vest. & elu, T-uwe elu & uwe elu Polo wdg. N'iji ala nke 8000 square mita na ndị ọrụ 280 na ụlọ ọrụ ya, Nanchang Lebanong Garment Co., Ltd na-etinye usoro njikwa mma gburugburu ma na-emepụta ngwaahịa uwe kacha mma maka ihe dị ka iberibe 300,000 kwa Isi ahịa anyị dị na America, Europe, South America, ahịa South Africa. Site na ahụmịhe na mmepe ihe karịrị afọ 10, anyị enwetala nnukwu ihe ịga nke ọma, ka ọ dị ugbu a anyị enwetara aha ọma n'aka ndị ahịa anyị niile nke ụwa.
N'ime mmepe afọ iri gara aga, anyị etolitela ezigbo mmekọrịta ọ bụghị naanị ndị ahịa, yana ndị na -ebubata ihe, yana ụlọ ọrụ na -ebi akwụkwọ na ndị na -akpa ihe, anyị na ndị na -ebubata ngwaahịa anyị ji obi anyị niile wee zụlite ma anyị nwere ike nye anyị ngwaahịa na ọrụ kacha mma. ndị ahịa.
Anyị ga-ekerịta isi okwu na oge COVID-19, anyị na-echekwa oge siri ike, yana ndị ahịa anyị ndị na-ebubata anyị, mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ, anyị emeriela ọtụtụ nsogbu ọnụ. , na anyị nwere obi ike inye ndị ahịa anyị nkwado siri ike n'ahịa, nke ahụ pụtara na anyị ga -enye onye ahịa ikpeazụ anyị ngwaahịa na ọrụ dị mma, n'agbanyeghị na ịzụrụ uwe n'ahịa nri abalị, ma ọ bụ ụlọ ime obodo, ọbụna obere ụlọ ahịa n'okporo ámá. , ị ga -ahụ ngwaahịa anyị, anyị emela nke a na mba ụfọdụ, ma anyị ji n'aka na a ga -enwekwu mba na ahịa n'ụwa niile.
Nabata gaa na webụsaịtị anyị maka ozi ndị ọzọ, ma kpọtụrụ anyị, daalụ!
Mmepụta kwa ọnwa